အလုပ်ခွင်တွင်စိတ်ပါအောင် ဆွဲဆောင်ခြင်း (Motivation in the Workplace from Learn English Website) - Myanmar Network
အလုပ်ခွင်တွင်စိတ်ပါအောင် ဆွဲဆောင်ခြင်း (Motivation in the Workplace from Learn English Website)
Posted by Myanmar Network on September 9, 2011 at 10:20 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
(Motivation in the Workplace from Learn English Website)
MP3 အသံဖိုင်၊ မူရင်းဆောင်းပါးနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများကို British Council Learn English website (http://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts/mo...) တွင် သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
စီစဉ်ခန့်ခွဲမှုပညာ ပါမောက္ခတစ်ဦးနှင့် အလုပ်ခွင်တွင်စိတ်ပါအောင် ဆွဲဆောင်ခြင်းအကြောင်း တွေ့ဆုံမေးမြန်ထားတာကို နားထောင်ကြည့်ပါ။
မေး။ ။ မန်နေဂျာတစ်ယောက်အတွက် အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်လှုံ့ဆော်ရတာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးပါသလဲ။
ပါမောက္ခ။ အိုဗျာ။ စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတာ သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ မန်နေဂျာတစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်မှာ အရေးအကြီးဆုံးအချက်လို့ ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ ဘယ်အလုပ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မန်နေဂျာတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန် ကတော့ အလုပ်ပြီးဖိ်ု့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဟာ အလုပ်သမားတွေရဲ့စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ဖို့လိုပါတယ်။ အဖွဲ့အနေနဲ့လဲ လှုံ့ဆော်ရမယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့လဲ လှုံ့ဆော်ရမယ်။ စိတ်ပါအောင် မစွဲဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင် အလုပ်ပြီးမှာ မဟုတ်ဘူး။
မေး။ ။ မန်နေဂျာတွေအနေနဲ့ ဒီလိုစွဲဆောင်တာတွေကို ဘယ်လိုများလုပ်နေကြသလဲ။ သိပ်တော့လွယ်မယ့်ပုံ မဟုတ်ဘူး။
ပါမောက္ခ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါကသိမ်မွေ့နက်နဲတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် မန်နေဂျာတွေဆီမှာ နည်းလမ်းကောင်းတွေရှိပါ တယ်။ ဒီနည်းလမ်းကောင်းတွေကို သင်ထားပြီးတော့ စိတ်ပါအောင် လှုံ့ဆော်တယ်။ ပြီးတော့ ထုတ်လုပ်မှုကို အမြင့် ဆုံးရအောင် လုပ်တယ်။
မေး။ ။ နည်းလမ်းကောင်းတွေဆိုတာ ဘာတွေလဲ။
ပါမောက္ခ။ ဟုတ်တယ်။ နည်းလမ်းကောင်းဆိုတာက ချီးကျူးစကားပြောတာပါတယ်။ ဆက်လုပ်လို့ပြောတာပါတယ်။ လုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကို အသိအမှတ်ပြုတာလဲ ပါတယ်။ ပြီးတော့ နည်းလမ်းကောင်းထဲမှာ ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတာလဲ ပါတယ်။ ဘာတွေမျှော်လင့်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေက အလုပ်သမားတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေပါ။
မေး။ ။ ပိုက်ဆံကကော။ ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုသဘောထားမလဲ။
ပါမောက္ခ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံဆိုတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းကို စာရင်းလုပ် လိုက်ရင် ပိုက်ဆံက နောက်ဆုံးနေရာက လိုက်တယ်။
မေး။ ။ ပိုက်ဆံရဲ့ရှေ့မှာ ဘယ်နည်းလမ်းတွေက နည်းလမ်းကောင်းတွေလဲ။ ဘယ်အချက်တွေက အလုပ်သမား တွေအတွက် ပိုပြီးအရေးကြီးသလဲ။
ပါမောက္ခ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်တွေက အရေးကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့အလုပ်ကို တန်ဘိုးတက် အောင်လုပ်တာလဲ ပါတယ်။ အလုပ်သမားနဲ့ အလုပ်ရှင်ကြား ဆက်သွယ်ရေးကောင်းအောင် လုပ်တာလဲပါတယ်။
မေး။ ။ ပါမောက္ခကြီးပြောနေတဲ့ အချက်တွေကို သက်သေပြနိုင်တဲ့ နမူနာတွေလက်တွေ့ ရှင်းပြပါလား။
ပါမောက္ခ။ သိပ်ကောင်းတဲ့နမူနာတစ်ခုကတော့ ၀က်စ်တန်အလက်ထရစ်ကုမ္ပဏီပဲ။ မန်နေဂျာတွေဟာ အလုပ်သမား တွေအပေါ် အရေးတစ်ယူလုပ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီး ထုတ်လုပ်မှုတွေ အရမ်းတက်လာတယ်။ မန်နေဂျာတွေဟာ အလုပ် သမားတွေကို ပြောပြောဆိုဆိုရှိလာတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရမယ့် ကိစ္စတွေမှာ ပါဝင်ကြဖို့ကိုလဲ အားပေးတယ်။ ဒီတော့ ငါတို့အလုပ်တွေဟာ အရေးကြီးပါလားလို့ ခံစားမိလာကြတယ်။ ဒီတော့ အလုပ်ဖြစ်တာပေါ့။
မေး။ ။ ထုတ်လုပ်မှုတွေကော တက်လာသလား။
ပါမောက္ခ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဆွီဒင်ကုမ္ပဏီ ကိုချွန်း ဆိုရင်လဲ နမူနာပြလို့ရပါတယ်။ အဲဒီကုမ္ပဏီက ပျက်မလိုတောင်ဖြစ် သွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မန်နေဂျာတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်ချပြီး လှုံ့ဆော်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။
မေး။ ။ သူတို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲ။
ပါမောက္ခ။ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အလုပ်သမားတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ သဘောထားကို ပြောင်းလဲလိုက်တာပါပဲ။ မန်နေဂျာတွေဟာ အမိန့်ပေးခိုင်းတဲ့ အလုပ်ကို ရပ်လိုက်ကြတယ်။ အမ်ိန့်ပေးခိုင်းတဲ့နေရာမှာ စည်းရုံးလှုံ့ဆော် လာတယ်။
မေး။ ။ အဲဒီနည်းလမ်းက အလုပ်ဖြစ်သလား။
ပါမောက္ခ။ တကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ တစ်နှစ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ 15 သန်း ရှုံးနေရာက ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း 100 ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
မေး။ ။ ကောင်းပါပြီဗျာ။ တည့်တည့်ပဲ မေးပါရစေ။ ပါမောက္ခကြီးပြောနေတာက အလုပ်သမားတွေဟာ ငွေကို စိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ ပြောနေတာလား။
ပါမောက္ခ။ ကျွန်တော်ပြောနေတာက အလုပ်သမားတွေဟာ ငွေတစ်ခုတည်းကို စိတ်ဝင်စားတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတာပါ။ ဒီအချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အရင်က ပြောခဲ့သလို တစ်ခြားအရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေရှိနေပါတယ်။ ချီးကျူးစကား တွေ၊ ဆက်လုပ်လို့ပြောတဲ့စကားတွေ၊ အသိအမှတ်ပြုတဲ့စကားလုံးတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ အလုပ်ကို တန်ဘိုးထားတတ်အောင် အားပေးတဲ့စကားတွေ၊ ပြီးတော့ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းကောင်းတွေဟာ အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပါ။
MP3 အသံဖိုင်၊ မူရင်းဆောင်းပါးနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများကို British Council Learn English website ( http://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts/mo...) တွင် သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by 2zoteoi0r1ztg on September 9, 2011 at 10:32
Thanks. Please send me more like that
Permalink Reply by စိမ်းမို့မို့ on September 9, 2011 at 10:32
Permalink Reply by 0ms7llyl75nrs on September 9, 2011 at 10:32
သေချာတာတစ်ခုက တို့ရုံးမှာ မရှိတဲ့အချက်က တော့
"ပါမောက္ခ။ ဟုတ်တယ်။ နည်းလမ်းကောင်းဆိုတာက ချီးကျူးစကားပြောတာပါတယ်။ ဆက်လုပ်လို့ပြောတာပါတယ်။ လုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကို အသိအမှတ်ပြုတာလဲ ပါတယ်။ ပြီးတော့ နည်းလမ်းကောင်းထဲမှာ ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတာလဲ ပါတယ်။ ဘာတွေမျှော်လင့်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေက အလုပ်သမားတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေပါ"
Permalink Reply by khinelay on September 9, 2011 at 10:51
မှန်ပါတယ်။ အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုတာ ခံယူချင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Khaung Khaung on September 9, 2011 at 10:57
Permalink Reply by Hnin Pwint Phyu on September 9, 2011 at 11:10
Permalink Reply by parvinn@southpoint-marine.com on September 9, 2011 at 11:15
thank u for sharing me:)
Permalink Reply by 195gizcelccs6 on September 9, 2011 at 11:18
that is right...thanks for information
Permalink Reply by Cocomotuti on September 9, 2011 at 11:18
Thank you..... I like it.....
Permalink Reply by kathy oo on September 9, 2011 at 11:36
Permalink Reply by kathy oo on September 9, 2011 at 11:39
Permalink Reply by 21w656dee40t3 on September 9, 2011 at 13:03
Yes, That's right,Thanks